Tsy mbola nisy nahavita izany angamba teto Madagasikara ary hita fa tena faly tokoa izy ireo mipetraka amin’irony hotely lehibe irony. Inoana fa sambany tamin’ny fiainany no nivoaka ny nosy ary niaina tamin’ireny fotoana sarobidy ireny. Raha atao kajy tsotsotra dia mandany eo amin’ny 15 tapitrisa ariary isan’ankizy eo ny fanjakana, raha ampidirina ny saran-dalana sy ny hotely ary ny sakafo ao anatin’ny herinandro. Fa ny indro kely sy fanontaniana dia ity : Izay ve no tena mety mahasoa sy maika ho an’ireny zaza ireny ?
Andao mba hijery lavitra kely. Nahoana raha hofanina ho tonga matihanina tsara amin’ny hira ry zaza kanto raha io kolontsaina io no heverina fa ho asany aoriana ? Nahoana raha sokafana amin’ireny sehatra fifaninanana iraisam-pirenena ireny izy ireo ? Aoka tsy hohadinoina fa tsy misy afa tsy ny fianarana sy ny fiofanana no ampinga tsara indrindra entina hiadiana amin’ny fahantrana.
Etsy an-daniny, tokony hojerena haingana ihany koa ireo mpanakanto Malagasy tsy an-kanavaka, mba hahafahan’izy ireo mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena satria fantatra fa tsy mbola tena mahavelona ny zava-kanto eto Madagasikara satria iva dia iva ny fahefa-mividy misy eto amintsika raha oharina amin’ny seho sy kanto any ampita. Maro ireo artista Afrikanina no efa tafiditra amin’izany sehatra maneran-tany izany. Raha tsy hitanisa afa tsy ry Manu dibango, ry Youssou Ndour sy maro hafa. Isika rahateo koa mila mahatoky tena fa manana traikefa ahafahana miditra amin’ny kalitao iraisam-pirenena. Moa tsy izany ve no vao nasehon’ny Barea farany teo ?
Eto am-pamaranana dia marina fa tsara ny fety fa manaitra ny maso eo no ho eo fotsiny ihany, ka tsy aleo ve mba zavatra tena maharitra no hatolotra rehefa samy hanao fandaniana ihany ?